юридическая консультация | Полезная информация для всех - Часть 150
ငါ့ကိုလျှပ်စစ်စေသည်။ ဒီဥပဒေရေးရာလား? ငါ 2011 တစ်နှစ်အတွက်အသုံးအနှုန်းစိစစ်အတည်ပြု elektroschtchika ပျော်စေနှင့်တိုက်ခန်းအားလုံး၏မြူနီစီပယ်ပိုင်ဆိုင်မှုခဲ့စဉ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတာနဲ့ 2014 ပုဂ္ဂလိကတိုက်ခန်းထဲမှာ ...
အပိုဒ် 105 ပြစ်မှုဆိုင်ရာ RF- ဤဆောင်းပါးကိုအောက်တွင်အဘယျသို့ပွစျဒဏျခံသောသူတယောက်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသလဲ?
အပိုဒ် 105 ပြစ်မှုဆိုင်ရာ RF- ဤဆောင်းပါးကိုအောက်တွင်အဘယျသို့ပွစျဒဏျခံသောသူတယောက်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသလဲ? ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ 105 ကြောင့်လူသတ်မှုဖြစ်တယ်, တကယ်တော့ထဲမှာ, ရာဇဝတ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်၏ထိပ် Co-အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည် ...
ငါ OKTMO အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုသိရသလဲ
အပေါ် Posted 15.08.2017 18.09.2018
ငါ OKTMO အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုသိရသလဲ သငျသညျအသစ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှတ်ပုံတင်နေတယ်ဆိုရင်, ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်စာရင်းအင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစာ၌သင်သည်ထိုကုဒ်ညွှန်ပြ။ ဘဏ္ဍာရေး http://www.minfin.ru/ru/search/?q_4=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BC%D0%BE ၏ site န်ကြီးဌာနအပေါ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအကောင့်ကိုဘယ်လို OKTMO codes တွေကိုသိကြဘူးဆိုရင် ...
အဘယျသို့ငွေပေးချေသည့်ပင်စင်စား၏သေသောနောက်, စေကြသလော ပထမဦးစွာအဆိုပါပင်စင်စား၏သေသောနောက်, သူ့ဆွေမျိုးနီးစပ်နီးပါးရှိပါသည်ရှိသည်ဟုထင်ပေမယ်ပေးခံခဲ့သောတစ်ဦးပင်စင်, paid ။ ဤငွေပေးချေမှုများအတွက်ပင်စင်ဆက်သွယ်သင့် ...
Как позвонить за счёт собеседника? Для того, чтобы позвонить за счт собеседника на МТС надо набрать специальный код, а именно — 0880. Если вы звоните на Билайн, то тут вам…
ကျွန်ုပ်မည်သို့ VAT နံပါတ်ရှာရမလဲ?
ကျွန်ုပ်မည်သို့ VAT နံပါတ်ရှာရမလဲ? ယူကရိန်း၏နေထိုင်သူများသည်သင်၏ TIN လက်မှတ်ကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့အခွန်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လက်ခံရရှိ INN အခွန်ထမ်းကဒ်နံပါတ်နှင့်အခွန်ရုံးအမည်ပြောင်းခဲ့သည်အမည်ပြောင်းယခုမှန် ...
ယခင်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ 1 ... စာမျက်နှာ 149 စာမျက်နှာ 150
51 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,300 စက္ကန့်ကျော် Generate ။